Hery - Tsiky dia ampy | Jiona 2009 |
Manomboka manangasanga any koa ny fiandaniana amin'ny vondrona politika eto Roma. Misy roa moa etsy andaniny ny fizarana politika amin'izao fotoana izao dia ny mpomba ny HAT sy ny mitsipaka ny HAT (izay mbola mizara roa ihany koa, hamerina an'i Ravalo na manohatra ny HAT fotsiny). Fa etsy ankilany ihany koa dia misy ny tsy te hiditra amin'ny resaka politika fotsiny tsotra izao. Ireo izay mieritreritra hoe mampisaraka ny politika ka raha ny Gasy izay efa vitsy kely eto Roma no mbola zarazarain'ny firehan-kevitra politika. Ireto farany dia miteny mihtisy hoe OLP na olona leo politika. (tohiny)
Nahoana no tsy manangantsaina?
2009-06-22 @ 14:16 in Politika
Re fa betsaka ny olona tsy manangan-tsaina ao Antananarivo (ao aloha no hita). Mahagaga ihany raha ankatoky ny 26 jiona toa izao no vitsy saina mihofahofa eran'ny lavarangana... Fa fantatrao ve hoe nahoana no tsy manangan-tsaina ny olona?
Efa nampoiziko ihany hoe hivika ny serveur vokatry ny avatar satria isaky ny mitranga ny sary anakiray dia misy query mysql vitsivitsy. Mandalo controller sy model normal mantsy ilay avatar dia miantso queries amin'ny database na dia tsy ilainy akory aza. Tsy ilainy satria efa en cache daholo ny sary aorian'ny nanamboarana azy. (tohiny)
16km en 2heures tsy mandeha tongotra
2009-06-12 @ 07:33 in Izaho sy ny ahy
Raha mandeha tongotra dia mahavita 10km eo ho eo ny olona ao anatin'ny adin'ny roa. Mandeha normal io fa tsy mihazakazaka. Fa izaho amin'ny maraina ho aty am-piasana, raha vao tara kely fotsiny no miala ao antrano, izany hoe variana eto amin'ny ordinatera ka manjary miala amin'ny 7ora sy sasany, dia adin'ny roa be izao no anaovana ny làlana avy aty antrano mandeha miasa. Nefa dia 16km fotsiny... sady amin'izay mandeha bus sy metro fa tsy mandeha tongotra. Tompondakan'ny amboteiazy iny lalana mandeha eny aminay iny, tsy misy izay tsy mikolay manomboka amin'ny 7 sy sasany ka hatramin'ny 9 maraina. (tohiny)